Taiwan ရှိစက်ရုံတစ်ရုံနှင့်အတူအရည်အသွေးမြင့် Biodegradable ကွန်တိန်နာများ ထုတ်လုပ်သူနှင့် Biodegradable ကွန်တိန်နာများ ပေးသွင်းသူ၏လမ်းညွှန်ကိုရှာပါ။
SHANG SHIEN CHENG INDUSTRY CO., LTD. အကောင်းဆုံးကိုဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့သူဖြစ်ပါသည် Biodegradable ကွန်တိန်နာများ in Taiwanဤမြေကွက်၌အတွေ့အကြုံ .Years ကျနော်တို့အရည်အသွေးနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ဝေါဟာရ၌အကြှနျုပျတို့၏ကုန်ပစ္စည်းများအပြိုင်အဆိုင်များစေနိုင်ရန်အတွက်သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးကိုဆက်လက်။ အများဆုံးဈေးမှာအရည်အသွေးအမြင့်ဆုံးထုတ်ကုန်များကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အန္တိမပန်းတိုင်ပင်ဖြစ်သည်။ ဒီပန်းတိုင်ကိုနိုင်ဖို့အတွက်ကျနော်တို့အဆင့်မြင့်အပြောင်းအလဲနဲ့ပစ္စည်းကိရိယာများစတင်မိတ်ဆက်ကြပါပြီဟု, ထုတ်ကုန်တစ်ဦးသည်အလွန်မြင့်မားတိကျမှန်ကန်မှုကိုထိန်းချုပ်ထားသည်။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ထုတ်ကုန်နှင့် ပတ်သက်. မည်သည့်မေးခွန်းမေးစရာရှိပါကထိုကြောင့်, သင့်ကိုငါတို့ပြောပြနိုင်ပါတယ်။ ငါတို့ကဲ့သို့အမြန်ဆုံးသကဲ့သို့သင်တို့ကိုအဖြေပေးလိမ့်မည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ website သွားရောက်ကြည့်ရှုမှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်။
ပုံစံ - PLA reusable-02
၁၀၀%biodegradable PLA ပန်းကန်ခွက်ယောက်များ-ပန်းကန်နှင့်ပန်းကန်
မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများကိုနေ့စဉ်သုံးသည်,မင်းမလုပ်ရင်’ပြုတ်ကျတာနဲ့ကွဲတာပြသနာမဖြစ်ချင်ဘူး,ဒါပေမယ့်လည်းကျန်းမာရေးကိုဂရုစိုက်ပါ,မယ်လမင်းပန်းကန်ခွက်ယောက်များအပြင်,ပိုကောင်းတဲ့ရွေးချယ်မှုတွေရှိတယ်.biodegradable ပစ္စည်းများကို သုံး၍ ပန်းကန်ခွက်ယောက်များကသင့်အားစိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုပိုပေးနိုင်သည်,တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းနှင့်အမှိုက်စွန့်ပစ်ခြင်းပြဿနာကိုဖြေရှင်းပါ.
ပစ္စည်း:ဆေးထိုး-အဆင့် PLA ပေါင်းစပ်
စက်မှုလုပ်ငန်းသုံးမြေဆွေးပလတ်စတစ် PLA ထုတ်ကုန်များ
Sunshine Enterprise သည်ဖောက်သည်များအား PLA ကုန်ကြမ်းများပေါင်းစပ်။ မှိုဖွံ့ဖြိုးစေရန်နှင့်အချောထည်ထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်ရန်ဆေးထိုးသည်.တစ်ခုပေါ့-ရပ်တန့်ခြင်းနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဒေါင်လိုက်ပေါင်းစည်းခြင်းအများစုသည် BIO ပစ္စည်းများနှင့်ပတ်သက်သောမည်သည့်ပြဿနာကိုမဆိုဖြေရှင်းရာတွင်ဖောက်သည်များအားကူညီနိုင်သည်.
Biodegradable ကွန်တိန်နာများ ၏အကောင်းဆုံးလမ်းညွှန်ကိုဝယ်ပါ။ Biodegradable ကွန်တိန်နာများ ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ Taiwan တွင်ရှိသောစက်ရုံ